American ankizivavy lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
American ankizivavy lalao
Tahaka ny zatovo monina any Amerika no hilaza maimaim-poana amin'ny aterineto lalao American Girl. Lasa iray amin'ny tanora tovovavy mahafatifaty izy, dia mandany andro mahaliana izay fisehoan-javatra maro mahafinaritra. Rehefa milalao, dia tsidiho ny hatsaran-tarehy Salon ny manamboatra ny volony, manicure upgrade, mividy sasany veshchichek lamaody. Ny mahery fo no hampahafantatra anao namany, izay hizara ny mahaliana azy. Ho ny bachelorette antoko, ny tantaram-pitiavana fihaonana amin'ny lehilahy tsara tarehy, culinary lalitra, famolavolana fikarohana, efitra fanadiovana sy ny maro hafa mahafinaritra.
Lalao Tovovavy malagasy tamin'ny Category:
Asterix sy Obelix
Ny tsara indrindra American ankizivavy lalao
American Beauty: Fiomanana
Ny American Dream
Stylish American Indian
Lalao Amerikana tovovavy dia hampiseho aminao ny fomba ho velona ary inona no mahatonga ny ankizivavy
Lalao Online Rehetra American ankizivavy lalao
Options lalao ho an'ny tovovavy noforonina be fa azo nilalao hiaina mandrakizay isika, mamantatra kosa lalana samy hafa. Games American zazavavy nangonina eo ambanin'ny loha hevitra mitokana, sy miaraka amin'ny mpilalao fototra no mankany;
mahavariana maha mandeha,
dia mandray anjara amin'ny fifaninanana,
no mifidy ny akanjo sy ny taovolony.
Ary be dia be ny zavatra mahaliana miandry anao ao amin'ny kilalao isan-karazany. Azonao atao mihitsy aza ny fitantanana ny sambo ka nankany amin'ny trano feno niondrana an-tsambo, haka kegs fa isan-karazany ny milomano ao anaty rano. Fitantanana ny solosaina ihany totozy, manondro ny sasin-tenin'ny ny sambo, ary dia mankatò ny toromarika manaraka. Fa aza fifandonana tamin'ny Nampatorinay, satria aorian'ny fa nihozongozona-up, dia ho very ny anankiray barika, izay teboka iray miiba. Amin'ny alalan'ny fanangonana ny asa tanana rehetra mandritra ny diany, dia mametraka ny ny firaketana an-tsoratra, ary haka azy io angamba milomano manaraka raha te fotoana bebe kokoa hilalao lalao io.
hafa lalao American Girl
Games American tovovavy Manasa anao ny mandany fotoana amin'ny jono dia niaraka tamin'ny Caroline. Mipetraka eny an-tsambokely lavitra ny morontsiraka dia afaka hahazo be dia be ny trondro isan-karazany sy hitondra trondro an-trano ny lehibe. Raha mifantoka amin'ny ambaratonga mampiseho ny herin 'ny mitora, nanipy ny jono ho any amin'ny farihy, ary hijery ny fomba mampihetsi-po rehefa mahita ny jono trondro ary nalefa tany ny lelam-pitana. , Saingy efa tratra, dia jereo hoe firy ny hevitra no mahazo sy manaiky ny babo ho amin'ny harona amin'ny fipihana eo amin'ny trondro voalohany, ary avy eo nisy harona. Misy vatana ny rano, indrindra fa zavatra sarobidy, dia asongadina amin'ny loko samy hafa kintana – Izany dia hisambotra farafahakeliny roa ireo!
Avy eo, handeha any amin'ny Cozy café sy ny fomba mahery fo ny ho lasa ny tovovavy ny taona, haingana fiara amin'ny mpanjifa. Mba hanoherana fitoriana mpanjifa ary samy manana ny faniriana. Mba hahitana izay tadiaviny, tsindrio eo ny fanontaniana marika, ka dia hanamarika ny baiko ao amin'ny rahona. Ary avy eo vao ny latabatra tamin'ny vokatra, ary tsindrio eo amin'ny ny sary masina. Raha ny mizana dia miomana ny mifoha, ny vokatra dia vonona ary azo naka eo amin'ny lovia. Hanao ny asa haingana kokoa, Tsara ny maro baiko sy hanangona azy manodidina latabatra isan-karazany mba hitondra azy ireo avy hatrany noana mpitsidika.
Ny American Girl Doll Games hanatitra ny akanjo akanjo tsara tarehy ny tany Caroline sy misafidy avy ny sakafo ho an'ny taovolo, mifanaraka akanjo. Miezaha hitandrina ny antsipiriany ny voafidy fitafiana mifanentana ary isaina ho Ensemble mirindra.
Ankoatra izany, American lalao ho an'ny tovovavy manolotra ho any amin'ny faran'izay mahaliana niainany amin'ny fomba samy hafa ny fitaterana, ary na dia ny mitaingina eo ilay baolina fingotra kilalao. Games & laquo, telo misesy » voly ny olom-peheziny, izay zava-tsarobidy na dia hanangona hitombo tanimboly mamokatra. Nefa dia ho afaka manangona Rosiana saribakoly sy milalao miaraka ny biby fiompy, fanatanjahan-tena, ary hanao asa fanampiny, izay isan-karazany ny gameplay sy ny tombontsoa, ​​ankoatra ny hitondra be dia be ny fihetseham-po mahafinaritra. Interesting kilalao dia notanterahina foana amin'ny voninkazo maro loko sy miaraka amin'ny mozika mahafinaritra ho an'ny ankizy. Lalao video no ho tonga bebe kokoa tahaka ny mahasoa ny ankizy hianatra lesona izay haingana fihetseham-fikarakarana ny manavaka ny anarana, ny habeny sy ny loko mba hahita vahaolana ny marina, ary mianatra ny fototry ny matematika na ny soratra. Ao amin'ny lalao tsirairay, ny asa ihany no tsara sy ny fanatanterahana hanome vokatra tsara, sy ny fahafahana hifindra tany amin'ny ambaratonga manaraka. Izao ray aman-dreny no tsy tokony hafindrany ny zaza avy amin'ny Monitor, satria efa ho boky, fa tsara tarehy!